एम्बोस गरिएको व्यापार कार्ड - Print Peppermint
विलासी प्रीमियम कागजात
दर्ता, अन्धो, र पन्नी एम्बोसिंग
स्पट यूभी, डाई काट्ने, र रंगीन किनाराहरू
विलासी रूपमा कस्टम इम्बोस्ड बिजनेस कार्डहरू
विभाग: कलाकार व्यवसाय कार्डहरू, स्वत: विस्तार व्यवसाय कार्ड, बेकरी व्यवसाय कार्डहरू, नाई व्यापार कार्डहरू, बुटिक व्यापार कार्डहरू, व्यापार कार्ड, कार धुने व्यापार कार्ड, खानपान व्यवसाय कार्ड, व्यवसाय कार्डहरू सफा गर्दै, निर्माण व्यवसाय कार्डहरू, Dj व्यापार कार्ड, इलेक्ट्रीशियन व्यापार कार्डहरू, एस्थेटिशियन व्यापार कार्डहरू, ग्राफिक डिजाइन व्यवसाय कार्डहरू, कपाल र कपाल स्टाइलिस्ट व्यापार कार्ड, Handyman व्यापार कार्डहरू, HVAC व्यापार कार्डहरू, Keller विलियम्स व्यापार कार्ड, ल्याण्डस्केपि Business व्यापार कार्डहरू, व्यवसाय कार्डहरू, लॉन केयर व्यवसाय कार्डहरू, वकील व्यवसाय कार्ड, मेकअप कलाकार व्यवसाय कार्ड, मसाज थेरापी व्यापार कार्डहरू, मेकानिक व्यापार कार्डहरू, नेलहरू व्यवसाय कार्डहरू, नोटरी व्यापार कार्डहरू, चित्रकारी व्यवसाय कार्डहरू, पापाराजी व्यवसाय कार्डहरू, व्यक्तिगत व्यापार कार्ड, व्यक्तिगत ट्रेनर व्यापार कार्डहरू, फोटोग्राफी व्यवसाय कार्ड, दबाव धुने व्यापार कार्ड, घर जग्गा व्यापार कार्ड, रेस्टुरेन्ट व्यवसाय कार्ड, छत व्यवसाय कार्ड, सामाजिक मिडिया व्यापार कार्ड, वेल्डिंग व्यापार कार्डहरू
के हेक एम्बोस गर्दैछ?
एम्बोस गरिएको व्यापार कार्डहरू र डिबोज्ड कार्डहरू या त उठेको वा recessed राहत छविहरू र डिजाइनहरू सिर्जना गर्नेमा समावेश गर्दछ कागज र अन्य सामग्री।
An एम्बोस गरिएको ढाँचा पृष्ठभूमि बिरूद्ध खडा गरिएको छ, जबकि एक डिबोज्ड ढाँचा सामग्री को सतह मा धूप छ।
एम्बोसिंग सामान्यतया तपाइँको डिजाइनको कुनै पनि महत्त्वपूर्ण पक्षहरू जस्तै पाठ र लोगोमा लागू हुन्छ।
तपाईंको इम्बोस्ड बिजनेस कार्डहरूको लागि प्रेरणा र विचारहरू
म कतै छाप्ने छैन!
मैले प्रिन्ट पेप्पे मार्फत प्रिन्ट गरेको हरेक परियोजना...
मिन्ट महान भएको छ।
म सधैं गुणस्तर संग धेरै प्रभावित छु! १०/१० आर...
ग्राहक सेवा चट्टान ठोस थियो
मेरो दिमागमा रहेको डिजाइनको कार्यान्वयन आयो ...
जीवन धन्यवाद Print Peppermint! सम्पूर्ण प्रक्रिया धेरै सजिलो थियो, र यदि मसँग कुनै प्रश्न वा चिन्ता छ भने टोली सधैं मसँग सम्पर्कमा थियो। अभूतपूर्व ग्राहक सेवा को लागी धन्यवाद! म होलोग्राफिक फिनिश संग धेरै पागल छु
उत्तम लेबलहरूले तिनीहरूलाई माया गर्छन्!
मलाई सबै नमूनाहरू मन पर्छ। यसले मलाई ठूलो va देखायो...
विभिन्न रंग विकल्पहरूको riety।
विभिन्न लेटरप्रेस प्रिन्टको riety।
मुद्रण को विभिन्न शैली को riety Peppermint गर्न सक्छु।
नमूनाहरूको राम्रो प्याक :)
अर्डर भरिएको थियो र राम्रो देखिन्छ !!
तिनीहरूसँग उत्कृष्ट डिजाइनरहरू छन् र धेरै धैर्यवान छन्...
इम्बोस गरिएको व्यापार कार्ड मात्रा